Daawo Sawirrada: Sida ciidamadu uga hortageen maleeshiyaadki weeraray xarunta CID – Radio Muqdisho
Ciidmada Booliiska ayaa toogasho ku dilay dhamaan dableydii dooneysay iney gudaha u galaan xarunta baarista dembiyada CID qaraxa kaddib.
Wasaaradda Amniga Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaadday in maleeshiyaadki weerarka ku soo qaaday xarunta Dambi baarista ay ahaayeen 7-nin oo labo ka mid ah ay is qarxiyeen halka shanta kalana ay ciidamada booliiska toogteen.
Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo Warbaahinta kula hadlay xarunta CID-da ayaa sheegay in ciidamada amaanka ay hayeen xogta weerarkan ayna ka horgaeeen .
Waxa uu tilmaamay Wasiirka in maleeshiyaadka weerarka ku qaaday xarunta CID ay ahaayeen todobo nin oo shan kamid ah ay ciidamada toogteen iyaga oon wax dhibaato ah geeysan halka labo kalana ay banaanka isku qarxiyeen.
Wasiirka ayaa sheegay in Weerarkan ay ku dhinteen 13-qof oo shan ka mid ah yihiin dad shacab ah , waxa uuna intaa raaciyay in weerarkasi uu ku dhintay hal askari halka shan kalana ay ku dhaawacmeen, waxa uuna sheegay in todobada kale ee dhimatay ay ahaayeen naftood halligayaasha Shabaab.